लिम्बू लोककथा : च्याब्रुङ बाजा र नाचको उत्पत्ति
कात्तिक १७, २०७४| प्रकाशित १२:१४
भगवान् तागेरा निङ्वाफुले पृथ्वीमा नरचोलाधारी स्त्री र पुरुषलाई पति–पत्नीका रुपमा सृष्टि गरेको लगभग नौ पुस्ता पुग्दा केसिङ्गेन् र तिगेन्जङ्ना माइती र चेलीको जन्म भयो । तिगेन्जङ्नाले माइती केसिङ्गेनलाई सारै डाहा मात्र गर्थी, गालीगलौज गर्ने र बिखालु दुर्वचन मात्र लाउने गर्थी । यी दुई जनाका बीचमा मन पटक्क मिल्न सकेन।
एकपटक त केसिङ्गेन्लाई साह्रै रिस उठेछ, मन पनि भाँचिएछ कि क्या हो, ऊ आफ्नी चेलीलाई छाडेर अन्तै लाग्यो । केसिङ्गेन्बिनाको घर अँध्यारो भयो, ज्यानै नभएको जस्तो भयो । माइतीबेगर तिगेन्जङ्नाले धेरै दुःख पाई, सुर्ता गर्न थाली । दिनरात माइतीलाईमात्र सम्झिरहन्थी, उसको असाध्य माया लाग्न थाल्यो उसलाई।
‘अब जसो गरी भए पनि माइतीलाई खोज्न जानुपर्‍यो’, यस्तो विचार गरेर एकदिन माइतीको खोजीमा तिगेन्जङ्ना हिँडी । खोज्दै जाँदा दिन बिते, साता बित्यो, महिना पनि बितेर गयो, तैपनि उसले आफ्नो माइतीलाई फेला पार्न सकिन । एकदिन ऊ यौटा ठूलो वनमा पुगी । दिउँसो चर्को घाम लागेको थियो । तिगेन्जङनालाई साह्रै तिर्खा लागेर आयो । कतै पनि उसले पानी पिउन पाइन । पानी खोज्दाखोज्दा ऊ साह्रै गली।
केही बेरपछि उसले वनमा यौटा ठूलो च्याप्टो ढुंगा देखी । एकछिन बिसाउनुपर्‍यो भनेर त्यहाँ पुग्दा त ठूलो च्याप्टो ढुंगाको दाहिने देब्रेतिर ओखलीका झैं खोबिल्टाहरूमा पानी देखी । तिर्खाले आकुलव्याकुल भएकी उसले जे भए पनि यिनै खोबिल्टाको पानी पिउनुपर्‍यो भन्दै दाहिने खोबिल्टाको पानी पिई । त्यतिले पनि उसको तिर्खा नमेटिँदा देब्रे खोबिल्टाको पानी पनि धीत मरुन्जेल पिई र सिध्याई । त्यहाँबाट फेरि बाटो लागी । अन्त्यमा ऊ माथि मुनाखाम्देन भन्ने स्थानमा पुगी । त्यता पनि माइतीलाई नभेट्दा अब अरु खोजखबर गर्दै हिँड्न नसकी त्यहीं दुःखसुख जीवनयापन गर्दै बस्न थाली।
जीवन गुजारा गर्दै जाँदा तिगेन्जङ्ना अचानक गर्भवती भई । कसरी गर्भवती भई त्यो कुरा नबुझेर उसको चेत नै हरायो । यस्तो कसरी भयो भनेर रातोदिन भगवान्लाई मात्र पुकारा गर्न थाली । एकरात उसका आँखा झपक्क के लागेका थिए, भगवान् तागेरा निङ्वाफुमाले उसलाई यसो भन्नुभयो, ‘सुन्, तिगेन्जङ्ना, आफ्नो माइती खोज्दै आउँदा तँलाई बाटामा तिर्खाले साह्रै सतायो, ढुंगाको खोबिल्टाको पानी तैंले पिइस् । तर ती त पानी थिएनन् । दाहिनेपट्टि बाघको मूत थियो भने देब्रेपट्टि तेरै माइतीको मूत थियो । ती दुवै पिएर तँ गर्भवती भएकी होस्, अब बाघ र मान्छे जम्ल्याहा छोराहरू पाउँछेस्।’
एकपल्ट जोडले गर्जेर भाइलाई झम्टिन तम्तयार हुँदानहुँदै नाम्सामीले भन्यो, ‘दाजु, मैले कति मिलेर बसौं भन्दा पनि तिमी मानेनौ । मलाई मार्न खान मात्र खोज्यौ । कति भागें तर उम्कन सकिनँ, आज त भेटिहाल्यौ।
पछिबाट साँच्चै तिगेन्जङ्नाले बाघ र मान्छे, जम्ल्याहा छोराहरू पाई । जेठो बाघ केसामी भयो र कान्छो मान्छे नाम्सामी भयो।
दुवै जना दाजुभाइहरू सुरु सुरुमा त खुबै मिल्थे, साथै खान्थे साथै पिउँथे । जता गए पनि सँगै जाने गर्थे । बिस्तारै दुवै तन्नेरी भए, सँगसँगै सिकार गर्न थाले।
नाम्सामीले गुलेलीले जिवात्को सिकार गर्न थाल्यो भने केसामीले फट्यांग्रा, छेपारा र भालेमुंग्रो आदि मार्दै खान थाल्यो । नाम्सामी सुन्दर र होसियार थियो भने केसामी जहिले पनि रिसले मुर्मुरिई रहने खालको थियो।
एकदिन दुवै दाजुभाइ सिकारमा गएका थिए । सदा झैं केसामीले फट्यांग्रा, छेपारा र भालेमुंग्रो आदि मार्दैै खान थालेको बेला ‘यस्तो काम नगरन, दाजु’ भन्दा केसामी साह्रै रिसायो । तत्काल भाइलाई भन्यो, ‘यिनलाई मात्र होइन, तँलाई पनि मारेर खान्छु।’
त्यस दिनदेखि यता दाजुभाइका बीचमा बेमेलको अवस्था सिर्जना भयो र विचार तथा मन पनि मिल्न छोड्यो । केसामीले भाइ नाम्सामीलाई मारेर खाने मात्र बल गर्न थाल्यो । नाम्सामीलाई भने न रातको निद न दिनको भोक हुन थाल्यो । वन वनै लुकेर हिँड्न थाल्यो । केसामीको भने कहिले भाइलाई मारेर खान पाउँला भनी मुखबाट राल चुहिन थाल्यो।
आमा तिगेन्जङ्नालाई एकदिन यी सबै दुःखका कुराहरूको उसले बेलीबिस्तार लायो । यी कुरा सुनेर तिगेन्जङ्ना कता हो कता रोई । ‘यौटै भुँडीबाट जन्मिकन पनि जम्ल्याहा छोराहरूका बीचमा कताबाट यो कलह आइलाग्यो ?’ भनी तान बुन्दै शोकमात्र गर्दै बस्न थाली । आमा कान्छो छोरो नाम्सामीलाई जोगाउन खोज्दथी, तर केसामी भने मारेर धीत मरुन्जेल खान खोज्दथ्यो।
आमाले कहिले औलको खोंचतिर कहिले माथि लेकतिर नाम्सामीलाई लुक्न पठाउँथी । नाम्सामी तल औलमा लुक्न गएका बेला आमाले ‘तेरो भाइ त माथि लेकमा गएको छ है’ भनिदिन्थी । यसरी नै नाम्सामी लेकतिर गएका बेला ‘तेरो भाइ त तल औलमा पो गएको छ है’ भन्दै ढाँटेर त्यता पठाइदिन्थी । केसामीले भाइलाई कहिले पनि भेट्न सकेन । त्यसो हुँदा उसलाई औधी रिस उठ्यो । ‘आमा मलाई ढाँट्यौ’ भनेर आमालाई नै झन्डै खायो।
केसामी भुइँमा बजारिन त बजारियो, तर मर्‍यो कि मरेन नाम्सामीले खुट्याउन सकेन । भुइँमा राम्ररी हेर्दा दाजुका जुँगाहरू बतासले हल्लेको देखी ‘मेरो दाजु त अझै मरेको रहेनछ’ भनेर रुखमाथि नै बसिरह्यो।
एकदिन केसामी लेकतिर गएको थियो । तिगेन्जङ्नाले नाम्सामीलाई भनी, ‘अब त तेरो दाजुलाई सधैं ढाँट्न सक्दिन, म । ढाँट्दाढाँट्दा मेरो त मासी नै गलिसक्यो । तँ अब उँधो औलमा गएर धनु–काँड लिएर सिमलको रुखको नौ तलामाथि चढेर लुकी बस् है । तेरो दाजु आयो भने तलै पठाइदिन्छु, नत्र भने आज त मलाई नै मारेर चपाइ खानेछ।’
केहीबेरपछि घर आइपुगेको केसामीले रिसले आँखा नहेरी आमासँग भन्यो, ‘आमा, आजसम्म ढाँट्यौ मलाई, भाइ कतातिर गएको छ ? साँच्चो बताऊ, नत्र भने तिमीलाई नै खान्छु।’
बिचरी तिगेन्जङ्नाले तान बुन्दै आँसु पुछेर ‘उँधोतिर गयो’ भनी नाम्सामी गएको दिशातिर देखाइदिई । केसामी तत्क्षण भाइलाई खोज्न औलतर्फ हिँडिहाल्यो।
तिगेन्जङ्नाले बाबरी र सिल्लरीका फूल ल्याएर आफ्नो अगाडि रोपी । बाबरीको फूल केसामीको तथा सिल्लरीको फूल नाम्सामीको भनेर नाम लगाई दिई । ‘बाबरी फूल मरेछ भने केसामी मर्ला, सिल्लरीको फूल मरेछ भने नाम्सामी मर्ला’ भनी बाचा बाँधी । सुर्ता गर्दै तान बुन्दै ती फूलहरू मात्र हेरेर बसीरही।
तल भने केसामीले भाइ नाम्सामीलाई सिमलको रुखमाथि लुकेर बसेको देख्यो । ‘आज खानेकुरा भेटें’ भन्दै केसामी रुखमाथि चढ्न थाल्यो । रुखमाथि नाम्सामी भने के गरौं कसो गरौं भई डरले अत्तालिन थाल्यो । घरमा नाम्सामीको प्रतीक सिल्लरीको फूल ओइलाएको देखि आमा झन्झन् व्याकुल भएर रुन थाली।
‘अब मेरो दाजुले मलाई मार्ने नै भएछ । तैपनि लरतरो ढंगले त म मर्दिनँ । यो जिउ जसरी भए पनि जोगाउँछु । बचाउनै नसके त के गर्ने, मर्नैपर्‍यो,’ यस्तो कुरा मनमा सोचेर धनुमा काँड चढाई केसामीलाई हान्न थाल्यो । एकचोटि हान्यो, त्यो काँड केसामीले छल्यो, दोस्रो पटक पनि छल्यो । तेस्रो पल्ट पनि हान्यो, लागेन अनि चौथो पल्ट हानेको काँड पनि छल्यो । केसामी बाणहरू छल्दै सिमलको रुखमा माथिमाथि चढ्दै गयो । माथि घरमा भने सिल्लरीको फूल झन्झन् ओइलाएर जान थाल्यो । आमाको पनि सुर्ताले आधा मासु भयो।
नाम्सामीले पाँचौं, छैटौं, सातौं र आठौं पटक हानेका वाणहरू पनि छल्दै केसामी त भाइको सामुन्ने पुग्न आँटिहाल्यो । नाम्सामीको हातमा भने अब यौटा मात्र वाण उब्रेको थियो । एकैछिन विचार गर्‍यो । त्यति बेलासम्म केसामी उसको सामु पुग्यो । एकपल्ट जोडले गर्जेर भाइलाई झम्टिन तम्तयार हुँदानहुँदै नाम्सामीले भन्यो, ‘दाजु, मैले कति मिलेर बसौं भन्दा पनि तिमी मानेनौ । मलाई मार्न खान मात्र खोज्यौ । कति भागें तर उम्कन सकिनँ, आज त भेटिहाल्यौ । खाने नै हो भने किन दुःख दिएर मार्छौ, बरु आँखा चिम् पारी मुख आँ.....गर, तिम्रो मुखभित्र आफैं म उफ्रेर पस्छु।’
नाम्सामीको यस्तो कुरा सुनेर केसामी मनमनै खुब रमायो । ‘साँच्चै नै यौटा मान्छे मेरो मुखभित्र पसे... त ...’ भन्दै खुसीले आँखा सकेसम्म चिम्म पारेर मुख पनि सकेसम्म आँ गरी उघार्‍यो । त्यसैबेला नाम्सामीले उब्रेको त्यो यौटा बाण धनुमा चढाई सक्दो तन्काएर दाजुको मुखभित्र प्रहार गर्‍यो । वाण केसामीको मुखबाट पसेर तल उसको मलद्वार छिचोलेर बाहिर निस्क्यो । केसामी रुखका हाँगाहरू लाछ्दै तल भुइँमा ढ्याङङ ठूलो आवाजसित पछारियो । माथि घरमा भने बाबरी फूल झ्याप्पै ओइलाई भुइँमा लतारियो । केसामी मरेछ भनी आमाले बुझी । यौटै भुँडीबाट जन्मेका सन्तानमा यस्तो कलह उब्जेको देखि आमालाई साह्रै विरक्त लाग्यो।
केसामी भुइँमा बजारिन त बजारियो, तर मर्‍यो कि मरेन नाम्सामीले खुट्याउन सकेन । भुइँमा राम्ररी हेर्दा दाजुका जुँगाहरू बतासले हल्लेको देखी ‘मेरो दाजु त अझै मरेको रहेनछ’ भनेर रुखमाथि नै बसिरह्यो । पछिपछि त केसामीको सिनुबाट झिँगाहरू भननन उड्न थाले । एकपल्ट हरियो झिँगा केसामीको मुखबाट पसेर उसको मलद्वारबाट बाहिर निस्कियो र रुखमाथि नाम्सामीको नाककै सीधाबाट उड्दै गयो । त्यसबेला हरियो झिँगा गन्हायो । तब मात्र मेरो दाजु मरेछ भनी नाम्सामी भुइँमा ओर्लियो । उसको दाजु त मरेर कुहुन लागिसकेको थियो।
केसामीले मार्न जति नै बल गरेको भए पनि आखिरमा मान्छेको मन त हो, नाम्सामी दाजुको लाशमाथि कता हो कता रोयो । आमाको एउटै गर्भबाट जन्मेको दाजुलाई ऊ साह्रै माया गर्थ्यो । केसामीको छाला काढेर ‘पछि धरती तलमा आफ्ना वंशजहरूले केसामी र नाम्सामीको सम्झना गरुन्’ भनी दाजुको स्मृतिमा त्यो छालाको च्याब्रुङ बनाएर छाडिराख्यो । च्याब्रुङ बजाउँदा आज पनि घुरुङ घुरुङ गरी बाघ गर्जे झैं बज्छ । यही च्याब्रुङ आजकाल लिम्बू जातिको जातीय बाजा भएको छ।
(‘सयपत्री’ पूर्णांक १२ बाट साभार)
साहित्यकार गोपाल प्रसाद रिमालको नाममा राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना
अनुभूति : विमानस्थलमा बिछोडिएको मन
कविता : परेर के हुन्छ?
साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार बेलायतका काजुओ इसिगुरोलाई
कथा : एक अज्ञात यात्रा
जय छाङ्छालाई 'साझा पुरस्कार', 'गरिमा सम्मान' उषा शेरचनलाई
आगामी मार्चमा लगानी सम्मेलन गर्ने लगानी बोर्डको निर्णय
कालिमाटी तरकारी बजारका ५१ स्टलको सम्झौता खारेज
ओली सरकारका कारण देशकाे अवस्था नाजुक : डा. शेखर कोईराला
नगरपालिकाले जिम्मा लियो 'बाख्राको खोरमा थुनिएकी जैशी'को सम्पूर्ण उपचार
१४ अर्ब लगानीको चेन होटलका लागि लगानी बोर्डले दियो स्वीकृति
निद्राका समस्या र निद्रा लगाउने उपाय
विषाक्त रक्सी सेवनले मलेसियामा ४ नेपालीसहित १५ जनाको मृत्यु, ३३ बिरामी
बन्द हुँदै टक्सारका धातु उद्योग
लापरबाही नगरौं टाउको दुखाइमा
रौतहट एसिड प्रकरणः बिरामी कुरुवा नै पक्राउ
अस्पतालको बेडबाट इरफान खान : दुनियाँमा अनिश्चितता नै निश्चित हो
तौल घटाउँदा गरिने गल्ती, भ्रम र सही उपाय
के हो वंशाणुगत रोग, कसरी जोगिने ?
‘एम्बुलेन्स आएन, ४ जनालाई एउटै स्कुटरमा हालेर अस्पताल पुर्‍याएँ’
पेट्रोलमा २ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा ३/३ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि
४० जनासँग बयान लिँदा पनि पत्ता लागेन पूर्वराजदूतको हत्यारा